२०७१ चैत २३ गते, सोमबारको राशिफल जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
२०७१ चैत २३ गते, सोमबारको राशिफल
वि.सं. २०७१ चैत्र २३ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१५ अप्रिल ०६ तारिख
वैशाख कृष्ण द्वितीया, स्वाती नक्षत्र, तुला राशिको चन्द्रमा, हर्षण योग, वणिज करण
आजको मूहुर्त : अग्निवास(होमादि), अन्नप्राशन(पास्नी), अक्षरारम्भ, ऋण लिनेदिने, घर छाउने/ढलान गर्ने, दैलो राख्ने,
हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनको इच्छा जागेपनि त्यसका लागि समय र धनको जोहो हुन सक्दैन । घरपरिवारका सदस्यसँग मतभिन्नता बढ्नसक्छ । अनावश्यक र दिक्कलाग्दो यात्राको सम्भावना छ । घरका विपरीतलिंगी नातेदारको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । बन्दव्यापारमा मन्दी छाउने छ । आजका लागि शुभअङ्क ९ र शुभरङ्ग हलुका रातो वा पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रको कम्तीमा १९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
सहयोगी हातहरू पछि हट्न सक्छन् । मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुने छ । अनावश्यक र दिक्कलाग्दो यात्रा हुन सक्छ । भोगविलासमा मन जानेछ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो राम्रो समय होइन । आर्थिक सङ्कटको योग छ । ऋणसापटी लिनदिन आजको दिन अनुकूल हुँदैन । पारिवारिक जीवनमा असामान्यता आउनसक्छ । आजका लागि शुभअङ्क ४ र शुभरङ्ग पहेंलो वा गुलाबी हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ महालक्ष्म्यै नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
शत्रुहरूले तपाईंको चियोचर्चो गर्नेछन् । एकाबिहानै सन्ततिपक्षबाट समस्या आइपर्ने सङ्केत छ । आफन्तले नै कुरा काट्न र विश्वासघात गर्न थालेपछि मन अस्थिर र अशान्त रहने छ । उता पारिवारिक समस्याले पनि मन खिन्न हुनेछ । साँझपख मन भुलाउने उपायको प्राप्ति हुनेछ । आजका लागि शुभअङ्क ६ र शुभरङ्ग सेतो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
घरपरिवार र छरछिमेकमा असमझदारी बढ्न सक्छ । सामाजिक मर्यादामा आँच आउने सम्भावना छ । घरपरिवारबाट पनि आवश्यक सहयोग मिल्ने छैन । कडा परिश्रम गर्दा पनि सोचेजस्तो उपलब्धी हात पर्ने छैन ,व्यर्थै खेर जान सक्छ । हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँग वादविवाद पर्न सक्छ । आजका लागि शुभअङ्क २ र शुभरङ्ग सेतो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ सों सोमाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्छ । व्यापारिक वा दैनिक कामहरूमा समय प्रदान गर्न सकिने छैन । अनायासै खर्च बृद्धि हुने सम्भावना छ । सामाजिक र राजनैतिक क्रियाकलापले खिन्नता बढाउने छ । नजिकका मित्र तथा दाजुभाइसित मनमुटाव हुनसक्छ । आजका लागि शुभअङ्क ४ र शुभरङ्ग हरियो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ बुं बुधाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ८ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
पेसा वा व्यवसायमा नचाहेको जिम्मेबारी थपिन सक्छ, प्रतिष्ठामा कमी भएको महसूस हुनेछ । आज चिताए जति फाइदा हुनसक्दैन, परिश्रम निरर्थक हुनसक्छ । नातागोता र छरछिमेकीका किचलोमा समावेश हुनुपर्ने सम्भावना छ । कुनै वस्तु खरिद गर्दा हानि पुग्नसक्छ । बेकारका मानिसहरुको चाप बढ्नेछ । आजका लागि शुभअङ्क ३ र शुभरङ्ग सिन्दुरे रातो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ हं हनुमते नमः यस मन्त्रको कम्तीमा २३ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
आज गरिएको क्रियाकलापले तपाईंलाई दीर्घकालिक फाइदा पुग्न सक्छ, त्यसैले तपाईंले आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएर काम बनाउन सकिनेछ । नाम, दाम, प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त हुनसक्छ । आजका लागि शुभअङ्क ७ र शुभरङ्ग कालो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ शं शनैश्चराय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा २३ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
लगानीमा रहेका धनको उचित प्रतिफल नआउनाले दिक्क लाग्नेछ । बन्दव्यापार र व्यवसायमा समय दिन सकिंदैन र सोचेबमोजिम काम नबन्न सक्छ । धैर्यले काम लिने समय छ । छर–छिमेकमा भने केही असमझदारी बढ्ने योग छ । प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा पराजय ब्यहोर्नु पर्छ । आजका लागि शुभअङ्क ६ र शुभरङ्ग सफा र चम्किलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ शुं शुक्राय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
भाइबहिनी वा सन्ततिका समस्या निदानका लागि समय र धन खर्च हुने सम्भावना छ । आर्थिक समस्याले पिरोल्ने छ । कारोबार ठप्प हुने सम्भावना छ । व्यवसायबाट लाभ हुन सक्दैन । दाम्पत्यसम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । मातापितासँगको सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्नेछ । आजका लागि शुभअङ्क ५ र शुभरङ्ग पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ बृं बृहस्पतये नमः यस मन्त्रको कम्तीमा १९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
नोकरी वा व्यवसायका क्षेत्रमा देखापर्ने समस्याले निराश तुल्याउन सक्छ । तपाईंले गरेका सम्पूर्ण मिहिनेत र परिश्रमको प्रतिफल अरुले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना ेछ । आँफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तित्व अथवा पर्यवेक्षकका साथमा मनोमालिन्य हुनसक्छ । पिताको स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनुहोला । आजका लागि शुभअङ्क ७ र शुभरङ्ग नीलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ मृत्युञ्जयाय नमः यस मन्त्रको कम्तीमा २३ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
विभिन्न अनिष्ट दिनहरू मध्येको एउटा दिन आजको दिन पनि हो । सुखसुविधा र आनन्द प्राप्तिका लागि मन लालायित बन्नसक्छ । आज गरिएको धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक क्रियाकलापबाट व्यक्तिगत सम्मानमा हानि पुग्न सक्छ । साँझपख अशुभ कुराको सङ्केत प्राप्त हुनेछ । आजका लागि शुभअङ्क ३ र शुभरङ्ग रातो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ गं गणपतये नमः यस मन्त्रको कम्तीमा २१ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
आज किसिमकिसिमका समस्यासित जुध्नु पर्ने परिस्थिति छ । झैझगडा र मुद्दामामिलाभन्दा टाढै बस्नु उचित हुनेछ । यात्रा घातक बन्न सक्छ, धेरै टाढा नजानु होला । आम्दानीका मार्ग अवरुद्ध हुनेछन् । बोलीमा संयमता अपनाउनु होला, आफूले भनेको कुराले विपरीत अर्थ प्रदान गर्न सक्छ । आजका लागि शुभअङ्क २ र शुभरङ्ग सेतो वा घिउरङ्ग हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज ॐ नमः शिवाय यस मन्त्रको कम्तीमा २१ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।